सिन्धुपाल्चोक-२ प्रदेशसभामा रोचक भिडन्त
युवराज पुरी बुधवार, कात्तिक २९, २०७४ 2840 पटक पढिएको
क्रमशः प्रदेशसभा 'ख' का उम्मेदवार दावा लामा(माओवादी), निमा लामा(कांग्रेस) र 'क' का उम्मेवार युवराज दुलाल(माओवादी), विकास लामा(कांग्रेस)
सिन्धुपाल्चोकजिल्लाको दुवै प्रदेशसभाको चुनाव रोचक बनेको छ । कांग्रेस र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको लोकतान्त्रिक गठबन्धन तथा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले दुवै क्षेत्रमा युवा उम्मेदवारलाई अघि सारेका कारण चुनावी प्रतिस्पर्धा अझ रोचक बनेको हो ।
दुवै गठबन्धनमा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागमा मात्र परेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रदेश ‘क’ मा विकास तामाङ र ‘ख’ मा नीमा लामालाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । दुवै कांग्रेसका युवा नेता हुन् । वाम गठबन्धनबाट युवराज दुलाल र दावा तामाङ प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । दावा २०६४ सालको संविधानसभामा माओवादीबाट सभासद् बनेका थिए भने दुलाल पूर्वलडाकु हुन् । पूर्वसभासद् दावावाहेक बाँकी तीनै जना चुनावी प्रतिस्पर्धाको पहिलो अनुभव हासिल गर्दैछन् ।
पूर्वसभासद् दावा र पूर्वलडाकु दुलाललाई कांग्रेसका उम्मेदवारद्वय विकास र नीमाले कडा टक्कर दिने स्थानीयहरु बताउँछन् । स्थानीय चुनावमा वाम गठबन्धनको बढी मत रहेको दुवै प्रदेशमा लोकप्रिय मत तान्न सक्ने अपेक्षाले कांग्रेसले युवा उम्मेदवारलाई मैदानमा उतारेको चर्चा छ । राप्रपाको पुरानो गढसमेत समेटिएको यो क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका पशुपति शम्शेर राणालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा अघि सारेको छ । राष्ट्रिय पञ्चायतको चार निर्वाचन यसै जिल्लाबाट जितेका राणाले ०४८, ०५१ र ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा साविकको क्षेत्र नं. ३ बाट जितेका थिए । राणालाई टक्कर दिन अघिल्लो संविधानसभामा उनलाई नै पराजित गर्ने शेरबहादुर तामाङ मैदानमा छन् । साविकको क्षेत्र नं ३ को सबै र २ को आधा भूगोल यो क्षेत्रमा गाभिएको छ ।
साविकको क्षेत्र नं. ३ को राजनीति गर्दै आएका दुवै उम्मेदवार २ बाट गाभिएको क्षेत्रका मतदाताको मत तान्ने प्रयासमा छन् ।हेलम्बु, पाँचपोखरी गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका १० वटा वडा समेटिएको प्रदेश (ख) जनजातिको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो । माओवादी केन्द्रका दावा र कांग्रेसका नीमा जनजाति ‘सेन्टिमेन्ट’ तानेर चुनाव जित्ने रणनीतिमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले हेलम्बु तथा एमालेले पाँचपोखरीसहित मेलम्ची नगरपालिका जितेका थिए । स्थानीय तहको वाम मत जोगाएर चुनाव जित्ने दावाको रणनीतिलाई गठबन्धनप्रति असन्तुष्टको मत तानेर चुनौती दिने सोचमा नीमा देखिन्छिन् ।
प्रदेश ‘क’ का वामउम्मेदवार युवराज एमालेको मतले सजिलो जित निकाल्ने दाउमा रहँदा विकास वाम गठबन्धनको असन्तुष्ट कार्यकर्ता तानेर बाजी मार्ने रणनीतिमा छन् ।यो प्रदेशमा मेलम्ची नपाको तीनवटा वडा, इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा-साँगाचोकगढी नगरपालिकाका नौवटा वडा समेटिएका छन् । स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले इन्द्रावती जित्दा मेलम्ची एमाले र चौतारा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्दा (क) र (ख) दुवै प्रदेशमा वाम गठबन्धन बलियो छ । वाम गठबन्धनसँग २१ हजार २६ मत छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग १२ हजार ३ सय ३१ मत देखिन्छ । स्थानीय तहको मतकै आधारमा प्रदेशसभा (ख)मा भने दुवै गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । एक हजार छ सय २७ मतले मात्र वाम गठबन्धन अगाडि छ । वाम गठबन्धनसँग १९ हजार ७ सय ७२ र लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग १८ हजार १ सय २५ मत छ ।
गोरखामा एक बोरा सुतली बम भेटियो (अपडेट) 2704
सडकमा भेटिएको बम सेनाले डिस्पोज गर्‍यो 878